Kusolwa ukutapa kwenyuka ukhuvethe - Ilanga News
Kusolwa ukutapa kwenyuka ukhuvethe
“Nokuvulwa kwezikole kufundwe zonke izinsuku, kunomthelela”
UMUNWE ukhomba izidubedube zokuta-tshwa kwempahla ezitolo kushiswe nezakhiwo, okwenzeka ngenyanga edlule KwaZulu-Natal, mayelana nokwenyuka kwezibalo zabahaqwe yi-Coronavirus kulesi sifundawe, okuholele ekutheni sidlulele esi-shingishaneni sesithathu somkhu-hlane odalwa yileli gciwane,
Ekhuluma esigcawini sabezi-ndaba ebisisemahhovisi oMnyango wezemiSebenzi yoMphakathi eMayville, eThekwini, izolo ngeSonto uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala (osesithombe-ni), uthe ezinsukwini ezintathu ezedlule lesi sifundazwe siqinisekise abantu abawu-3 000 abatho-lwe beneCoronavirus.
Uthe ukwanda kwabatheleleka ngeCoronavirus, kudalwe kakhulu yilezi zibhelu lapho abantu bebewuvanzi, betapa impahla bengazifakile nezifonyo.
“Ukuvulwa kwemingcele lapho abantu sebevumelekile ukuha-mbela kwezinye izifundazwe, ukuvulwa kwezindawo zokucima ukoma nezokudla, nakho singasho ukuthi kube nomthelela ekwenyu-keni kwezibalo zabathelelekile.
“Ukubuyiselwa kwezingane zonke ezikoleni nakho ngeke sakushiya ngaphandle.
“Ezikoleni ezingaphezulu kweziwu-120 – lapho izingane zibuyele zonke – sithole ukuthi bangaphezulu kuka-800 abafundi nothisha abathelelekile,” kusho uMnu Zikalala.
Uthe emahoreni awu-24 lesi sifundazwe sithola cishe abantu abawu-3 445 abanaleli gciwane.
Udalule nokuthi ngisho izibalo zabantu abalaliswa ezibhedlela zenyuka ngendlela engajwayelekile, ikakhulukazi emagunjini abagula kakhulu.
“Kumanje umnyango wezempilo ubheka izindlela zokwenyusa isibalo semibhede emagunjini abagula kakhulu.
Ukukhula kwezibalo zabathelekayo esifundazweni kunyusa nesabafayo.
“Esikhathini esingangesonto, sithole ukuthi sinyuke ngo-16% isibalo sabashonayo uma siqha-thanisa nesikhathi esifanayo ngesonto eledlule,” kusho yena.
Uthi lesi sifundazwe sinemi-bhede eyanele eyayisetshenziswa ngesikhathi kuhlasele isishingi-shane sokuqala nesesibili salo mkhuhlane, ezosiza uma kwenzeka sinyuka kakhulu kunalokhu isibalo sabayidingayo.
“Siyabanxusa abantu bakithi ukuba basheshe basukume baye ezibhedlela uma bengazizwa kahle ukuze basheshe balashwe, kunciphe izibalo zabafayo isidingo singekho. Sinxusa abantu ukuba bagome.
“Ngosuku sigoma abantu abawu-30 000. Inhloso wukufinyelela ku-7.2 million wabantu ngaphambi komhla ka-31 kuNdasa (March) 2022 kanti kumele ngabe sigoma abantu abawu-60 000 ngosuku,” kusho uMnu Zikalala.
Previous articleKwenyuke izimendlela kobehlahla umoba
Next articleLiyaqhubeka ishobolo leChiefs ngezindebe